အွန်လိုင်းပညာရေး — Steemkr
သိသာလူငယ်များလုပ်နေတာပျော်မွေ့နေတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်များ၏အများစုသူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမယ့်အစား, ပို့ချချက်ကိုနားထောင်နေတဲ့စာကြည့်တိုက်၌ထိုင်, မရေမတွက်နိုင်တဲ့စာစီစာကုံးနှင့်အစီရင်ခံစာများရေးသားခြင်းနှင့်စာမေးပွဲစိုးရိမ်ပိုပြီးတက်ကြွနည်းလမ်းတွေပိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောစကားမှန်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်သည်ပညာရေးခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအလွန်အရေးပါသည်ဟူသောအချက်ကိုအတူငြင်းပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကဒီပလိုမာမကြာခဏအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝကိုတစ် တကမ်ဘာတစ်ဦးလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်, ဤန်းကျင်တစ်လမ်းဖြစ်လည်းမထင်ထားဘူး။
အဲဒါကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကတဦးတည်းအပြည့်အဝတာဝန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဧရိယာရွေးချယ်ရာတွင်ချဉ်းကပ်သင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်သည်အဘယ်သို့သင်၏အကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်အတွက်လေ့လာနောက်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ကြသည်။ အထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရများနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဝင်များအကြားအချိန်: ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဖြစ်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်၏ပညာရေးစနစ်များလူငယ်များကို "ကွာဟမှုတစ်နှစ်" ယူခွင့်ပြုအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်လူငယ်တစ်လူတစ်လိုလားဘာမှအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပါမယ်သူသို့မဟုတ်သူမကြောင့်ပညာရေးအဘို့အဆပ်ဖို့ပိုက်ဆံဝင်ငွေ, ဒါမှမဟုတ်အများဆုံးဆွဲဆောင်ပုံရသည်သောအသက်လမ်းထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့မူကားတစ်ဦးအမှားလုပ်နှငျ့သငျရှေးခယျြခဲ့လေ့လာမှုများ၏လယ်ပြင်သင်တို့အဘို့မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ရင်တောင်သင်အမြဲတစ်ဦးအလှည့် ယူ. အခြားလမ်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာဖို့လိုသူမည်သူမဆိုမခွဲခြားဘဲမိမိတို့၏အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ယခင်ပညာရေးနောက်ခံ, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အပြည့်အဝနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တိကျတဲ့စည်းကမ်းဆုံးမဩဝါဒပေးအထူးပြုကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းကျောင်းများရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်ကိုပြောင်းချင်, ဒါမှမဟုတ်သင်လက်ရှိလေ့လာသစ်တစ်ခုခုကြိုးစားနေတူခံစားသောအရာကိုအတွက်စိတ်ပျက်နေကြသည်ဖြစ်စေ, သင်တို့အဘို့တစ်ခု ကိုအမြဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအွန်လိုင်းလေ့လာနေမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုရွေးချယ်မှုနိုင်ပါတယ်။
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပဒေသာရှိပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကောင်း နှင် သော်လည်း, ထိုကဲ့သို့သော နှင့် အဖြစ်အခြားသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများအချို့ကိုသို့မဟုတ်သင့်မိခင်ဘာသာစကားကိုထောကျပံ့မပေးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်သင့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကောင်း, သငျသညျတှငျနထေိုငျဒေသတွင်းအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ဤဝန်ဆောင်မှုများအချို့အများဆုံးဖွယ်ရှိအဖြစ်ကောင်းစွာသင်ရွေးချယ်အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သောသိသိသာသာဈေးလျှော့ပူဇော်နိုင
esteem online education growth wide
This post has receiveda1.80 % upvote from @booster thanks to: @tnay.
You gota4.20% upvote from @emperorofnaps courtesy of @tnay!